LABAALEEYDII SHULUQA: Taageerayaasha baraha bulshada oo sawirro maad leh ka sameeyay kulankii Juve-Monaco (Arag) – Gool FM
(Monte Carlo) 04 Maajo 2017 – Waxaa kulankii xalay ee ay Juventus uga badisay kooxda Monaco aad ugu maadsadey taageerayaasha oo siyaabo kala duwan baraha bulshada ugusoo bandhigay halkudhegyo qosol miiran ah.
Hal sawir baa wuxuu muujinayaa milkiilaha Napoli ee Aurelio de Laurentis iyo Paul Pogba oo lagu dul qoray: ”Marka aad ogaato inuu Higuain labaaleey dhaliyay”.
Sawir kale ayaa tilmaamaya inaan xitaa la cafinin macallinkii hore ee Juventus ee Antonio Conte oo dhowr jeer ku faloobay Yurub waloow uu wacdaro ka dhigay horyaalka waxaana lagu qoray Gufonte oo ka dhigan ”Conte guumays”.
Sawir kale oo qosol badan ka muuqda 2 Dameer Farow oo buurbuuran waxaana lagu dul qoray: ”Labaaleeydii shuluqa” iyadoo loola jeedo Higuain.
Mid kale waxaa ka muuqda isla Higuain oo ku hor dabbaal degaya makhaayadaha silsiladda ah ee McDonalds taasoo loogu qarinayo inuu cunnati yahay.